WARRIORS QUALIFY FOR GABON newsdzeZimbabweNewsdzeZimbabwe
WARRIORS QUALIFY FOR GABON
Zimbabwe have for the third time qualified for the 2017 edition of the African Cup After a convincing 3-0 home win over Malawi that was aided with Swaziland’s 1-0 win over Guinea.
Goals from Knowledge Musona, Khama Billiat and substitute Cuthbert Malajila gave Zimbabwe a well-deserved victory that saw them move to 11 points on top of the Group L standings ahead of Swazilalnd (8), Guinea (5) and Malawi (2).
This was Malawi’s first away defeat and there was little they could do as Zimbabwe were unstoppable with a 2-0 lead at the break through a 16th minute Musona penalty while Billiat’s effort later gave Zimbabwe control.
It was late in the second half that Malajila added the second with a header in the Malawi box.
Zimbabwe’s final match in the Group is against Guinea away in Conakry but the results there would not matter as a loss for the visitors would not have any impact. Guinea will move to eight points while a win for Swaziland over Malawi would take them to 11 points but Zimbabwe has a better head-to-head record.